NetHack, mutambo uyo wakagadziridzwa kwemakore makumi matatu nemaviri | Linux Vakapindwa muropa
NetHack ndomumwe wemitambo yekare ndichiri kusimukira (kubvira 1987), nekuenderera mberi nekuvandudza uye kugadzirisa bug kunoitwa neboka revanozvipira, iyo inonzi iyo DevTeam.
Este mutambo zvezviitiko akanyanyisa kupindwa muropa Dungeons uye Dragons maitiro. Iyo "net" element inoreva kukura kwayo kuri kuratidzwa kuburikidza neInternet, nepo "hack" element ichireva kune imwe mhando yemitambo-yekutamba mitambo inozivikanwa seyekuba uye yekukanda yekutarisa kwavo muhondo.
Iyo yetsika nzira yekutamba NetHack iri kuburikidza neASCII mifananidzo, Ndokunge, nemifananidzo yakaumbwa chete nemavara uye mavara kubva mukomputa (izvi imhaka yekuti NetHack inotora mukana wekushandiswa kweiyo Unix inotuka raibhurari, yakafanana nemimwe mitambo yemaitiro aya tsika kuita).
1 About NetHack
2 Chii chitsva muNetHack 3.6.3?
3 Maitiro ekuisa NetHack paLinux?
Chinangwa chikuru chemutambo kutsvaga Amulet yeYendor, kunyangwe hazvo mutambo wese inogona kuwanikwa nemamwe mamishinari kuzadzisa, kungave sekuwedzera kune chikuru chinangwa chekudzoreredza Amulet kana sechikamu cheiyo yepakati mishoni (kazhinji usingazive kuti ivo chikamu chayo).
Kusiyana nemimwe mitambo yakawanda yakafemerwa neDungeons & Dragons, kukosheswa muNetHack ndiko kufumura ruzivo rwegomba uye kwete kungouraya zvese zvinoonekwa; kutaura zvazviri, kuuraya zvese zvinoonekwa inzira yakanaka yekufa nekukurumidza.
Chikamu chega chega chemutambo chinogara chakasarudzika uye chakasiyana pakati pemutambo wega wega, sezvo iwo mazinga anogadzirwa zvisina kujairika (kunze kwemamwe akakosha mazinga). Semumitambo mizhinji, zvinhu zvinogara zvine tsananguro yakasarudzika kubva kumutambo kuenda kumutambo uye chete kusvikira mutambi anyatso kuratidza zvinhu izvo kuti azive zvavari.
Zvikara zvinowanzomiririrwa nemavara makuru nemadiki. Tsamba imwe neimwe inoreva rudzi rwezvikara zvakawandisa (canines, zvipembenene, fimin, vanhu, nezvimwewo), uye nemavara (kana aripo mune inoenderana) kana mimwe mirairo mumutambo inokutendera kuti uone chakanyanya chikara.
NetHack mutambo wakaoma uye wakaoma. VaNewbies vanogona kupererwa pakutanga kana kutopedzisira vasiya mutambo, ndosaka mutambo uri zita chairo kune vekare vatambi.
45-50 mazinga, mazhinji acho anogadzirwa zvisina kujairika.
Zvinhu zvakasiyana-siyana: zvombo, zvombo, mipumburu, potions, mhete, matombo, uye zvakasiyana maturusi senge makiyi nemarambi.
Permadeath - Anopera mavara haakwanise kumutswa pasina kutsigira iwo chaiwo ekuchengetedza mafaera.
Chii chitsva muNetHack 3.6.3?
Parizvino NetHack iri kuenderera ichitambira zvigadziriso uye ndeyekuti munguva pfupi yapfuura timu yeNetHack yekuvandudza Ini ndinosunungura iyo nyowani vhezheni yeNetHack 3.6.3.
Iyi vhezheni ine kunyanya kugadzirisa bug (zvinopfuura 190), pamwe nekuvandudza kunopfuura makumi maviri nemana kumutambo, kusanganisira izvo zvinokurudzirwa nenharaunda.
Kunyanya, zvichienzaniswa neiyo yapfuura vhezheni, iyo yekutuka interface pane ese mapuratifomu yakagadziriswa zvakanyanya. Yakavandudzawo basa muMS-DOS (kunyanya mumachina chaiwo).
Iyo 3.6.3 kuburitswa ndeyekupedzisira pabazi 3.6 uye inovhura kutanga kwekuvandudzwa kwebazi 3.7. Kuburitswa kukuru kunotevera kunotarisirwa kuve 3.7.0, umo kwakarongwa kuunza maficha matsva pamwe nekuchenesa hwaro hwekodhi kutsigira akati wandei echinyakare mapuratifomu.
Maitiro ekuisa NetHack paLinux?
Kune avo vanofarira kuisa uyu mutambo pane yavo system, vanogona kuzviita nenzira inotevera.
Chekutanga muenzaniso tinogona kurodha pasi tgz package yavanopa yakananga kubva kune yavo saiti yepamutemo Webhu. Izvi zvinogona kuwanikwa nekuvhura terminal uye typing:
Iye zvino tava kuzobvisa pasuru yacho ne:
Waita izvi tinoenda ku subdirectory sys / unix uye unomhanya setup.sh
Isu tinodzokera ku src subdirectory uye mhando
Mutambo zvino uchanyora kwenguva yakareba. Gare gare isu tinofanirwa kuuraya
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » NetHack, mutambo uyo wakagadziridzwa kwemakore makumi matatu nemaviri